जनताको पक्षमा बोल्नेहरुलाई सिध्याउनु यो व्यवस्थाको विशेषता नै हो – शिव सेना « Bikas Times
जनताको पक्षमा बोल्नेहरुलाई सिध्याउनु यो व्यवस्थाको विशेषता नै हो – शिव सेना
काठमाडौं । स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी छ बुँदे माग राखेर १९ औं सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीको ज्यान जोखिममा परेको भन्दै शिव सेना नेपालले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
शिव सेनाका अध्यक्ष अनिल बस्नेत ‘बाबा’ले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘माफियाको माग पूरा गर्दा भ्रष्ट शासकहरुले चरसको थालमा मार्सी चामलको भात खान पाउँछन् । डा. केसीको माग पूरा गर्दा उनीहरुले व्यक्तिगत रुपमा केही पाउँदैनन् । यसकारण यो व्यवस्थाका नाइकेहरु डा. केसीजस्ता अभियन्तालाई अनसनमै मृत्युवरण गर्न विवस बनाइरहेका छन् ।’
डा. केसीलाई शिव सेनाले ‘जनताका डाक्टर’को संज्ञा दिँदै उनका हरेक मागले देश र जनताको हित गर्ने जनाएको छ ।
काठमाडौंको सुखसयल र सत्ताको मोजमस्तिमा दिन बिताइरहेका शासकहरुले अछामका जनताको नसुन्नु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै शिव सेनाले लेखेको छ, ‘भ्रष्टाचारमा अर्बौं सिध्याउन सक्नेले मेडिकल कलेज खोल्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । कोरोनाबाट जोगाउन केसीको सुझाव अस्वीकार गर्नुको पनि शंकास्पद छ । यति जनहितकारी सुझाव नमान्नुको अर्थ केसीलाई ‘मरे पनि फरक पर्दैन’ भन्ने भन्ने सन्देश दिइएको हो ।’
डा. केसीलाई कथंकदाचित तलमाथि केही भइहाल्यो भने उत्पन्न हुने जनताको आँधिहुरीले के के उडाएर लैजान्छ, त्यो वर्तमान शासकले कल्पना गरेभन्दा भयंकर हुने भन्दै शिव सेनाले व्यवस्थामाथि नै धावा बोलेको छ ।
देशका मेडिकल माफियाको चुंगलमा परेको वर्तमान सरकारले केसीको माग पूरा गर्दै नगर्ने र गरिहाले पनि कार्यान्वयन नगर्ने नियत राखेको शिव सेनाको दावी छ । केसीको माग पूरा गर्दा जनताले सुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने हुँदा वर्तमान सरकार यस्तो गर्ने पक्षमा नरहेको शिव सेनाको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ – जनताले सर्वसुलभ रुपमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा पाए भने मेडिकल माफियाहरुले खोलेका अस्पताल र मेडिकल कलेजहरु बन्द हुन्छन् । वर्तमान सरकारले यस्तो हुन कदापी दिँदैन । बरु जनता मार्छ तर माफियालाई जोगाइरहन्छ ।
अधर्मको जगमा खडा भएको वर्तमान व्यवस्थाले पवित्र मानिसहरु र पवित्र भावनाका साथ सत्याग्रहमा रहेकाहरुको आवाज कदापी सुन्न नसक्ने भन्दै शिव सेनाले सत्य र निष्ठामा रहेकाहरुलाई नयाँ व्यवस्थाका लागि संगठित हुन आह्वान गरेको छ ।
शिव सेनाले लेखेको छ, ‘अनसनमै नन्दप्रसाद मरे, डा.केसीको पनि ज्यान लिने तयारी भइरहेको देखिन्छ । सत्य र न्यायका पक्षमा उभिनेहरुलाई भौतिक रुपमै सिध्याउनु यो व्यवस्थाको विशेषता नै भएको छ ।’